Shirka Saddex billaha ah ee Hay’adda Socdaalka iyo Agaasimaha guud ee Hay’adda Socdaalka oo soo bandhigay qorshaha seddexda bil ee soo socota Sawiro | Dayniile.com
Home Warkii Shirka Saddex billaha ah ee Hay’adda Socdaalka iyo Agaasimaha guud ee Hay’adda...
Shirka Saddex billaha ah ee Hay’adda Socdaalka iyo Agaasimaha guud ee Hay’adda Socdaalka oo soo bandhigay qorshaha seddexda bil ee soo socota Sawiro
Shirka Saddex billaha ah ee Hay’adda Socdaalka iyo Jinsiyadda Soomaaliya oo looga hadlayay dardargelinta adeegyada bulshada ayaa maanta ka furmay magaalada Muqdisho.
Shirka ayaa diiradda lagu saaray waxyaabihii u qabsoomay Hay’adda seddexdii bil ee lasoo dhaafay iyo qorshaha seddexda bil ee soo socota, waxaana ka qeyb-galay mas’uuliyiin ka tirsan dowladda Federaalka Soomaaliya iyo Maamulka Gobolka Banaadir.
Agaasimaha guud ee Hay’adda Socdaalka iyo Jinsiyadda Soomaaliya Mudane Maxamed Aadan Jimcaale (Koofi) ayaa soo bandhigay qorshaha seddexda bil ee soo socota ee lagu soo kordhainayo adeegyada dadweynaha Soomaaliyeed ay u qabato hay’adda Socdaalka.
Taliyaha Ciidanka Booliska Soomaaliya Sareeyo Gaas Cabdi Xasan Maxamed (Xijaar) ayaa ku amaanay shaqada wanaagsan oo ay hay’addu soo qabatay, ayna ka rajeynayaan inay xoojisa shaqada
Guddoomiyaha Maxmada Gobolka Banaadir Cabdiqadar maxamed Xasan , guddoomiye ku xigeenka amniga iyo siyaasada Gobolka Banaadir Cali Cabdi wardheereYare Cabdi iyo Agaasimaha guud ee wasaaradda Amniga Yuusuf Cali Maxamed ayaa sheegay in wadashaqeyn dhaw ay la leeyihiin hay’adda socdaan iyo Jinsiyadda, ayna diyaar u yihiin inay xoojiyaan wada shaqeynta kala dhexeysa iyaga iyo hay’adda.
Wasiir ku-xigeenka Maaliyadda Soomaaliya Prof Cabdullaahi Sheekh Cali Qaloocoow ayaa sheegay in Wasaaradda Maaliyadda ay wada shaqeyn buuxda kala dhexeeyo hay’adda Socdaalka
Wasiirka Gadiidka iyo Duulista hawada ee Xukuumadda Federaalka Soomaaliya Duraan Axmed Faarax ayaa kula dar daarmay Saraakiisha iyo saraakiil xigeennada Hay’adda ee ka soo qaybgalay shirka inay laban laabaan hawlaha muhiimka ah ee ay shacabka u haayaan.
“Hay’adda Socdaalka iyo Jinsiyadda, waxay soo bandhigeen waxqabadka saddexdii bilood ee ina dhaaftay, waxa ayna muujiyeen in ay qabteen shaqo bogaadin mudan, hayadu waa marinka laga soo galo dalka, waxayna maamushaa qaadashada Baasaboorka, deganaanshaha iyo viisayaasha”. Ayuu yiri Wasiir Duraan.
Previous articleRooble oo Ummadda Soomaaliyeed uga tacsiyadeeyay geerida Guddoomiyihii Akadeemiyad goboleedka Afka iyo Guddiga dib u eegista Dastuurka
Next articleDowlada Itoobiya oo yeelatay dowlad deegaankii 11-aad oo qaata madax banaani
Baarlamaanka Itoobiya ayaa maanta codka kalsoonida siiyay xukuumadda Cusub
Baarlamaanka Itoobiya ayaa maanta codka kalsoonida siiyay xukuumadda Cusub, ee uu soo dhisay Ra’iisul Wasaare Abiy Axmed, oo ka kooban 22 wasiir. Abiy Axmed ayaa...
Musharxiinta ku kuraasta aqalka sare ee Somaliland oo goor dhaw bilaaban...
Sweden oo Soomaaliya u soo dirtay wakiil horay uga soo shaqeeyay...
Wasarada Arimaha dibada Mareykanoo cadaasi adag saaray Rooble iyo Farmaajo
Golaha Nabadda & Ammaanka AU-da oo taageeray Ballaarinta howlgalka Soomaaliya.
Cumar C/rashiid: madaxwayne Sheekh Sharif waxa uu qeyb ka ahaa geedi-socoda...
Ciidamada Ahlusunna oo oo la wareegay gacan ku heynta degaano ka...